Muxuu ku jawaabay Luka Modric markii uu Eden Hazard weydiistay lambarka 10-aad ee kooxda Real Madrid? – Gool FM
(Madrid) 13 Juunyo 2019 – Real Madrid ayaa maanta garoonka Santiago Bernabeu ku soo bandhigtay laacibkeeda cusub ee Eden Hazard, iyadoo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha kooxda ee Florentino Perez.
Weeraryahankii hore ee kooxda Chelsea ayaa iminka shaaca ka qaaday inuu Modric weydiistay inuu siiyo lambarka 10-aad ee Los Blancos xitaa inta uusan soo gaarin Spain oo aan la soo bandhigin.
Eden Hazard ayaa caan ku ahaa xirashada maaliyadda lambarka 10-aad ee uu xiran jiray kooxdiisii hore ee Chelsea iyo waliba xulkiisa qaranka Belgium, laakiin Real Madrid kama heli doono xirashada lambarkaan maadaama uu u sito xiddiga ku guuleystay Kubadda dahabka ah ee laacibka ugu fiican Adduunka, Luka Modric.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ee Hazard oo ka hadlay xiriirka uu la soo sameeyey Luka Modric intii uusan soo gaarin garoonka ayaa yiri: “Waxaan awooday inaan la hadlo Modric anigoo u sii dhex-maraya Mateo Kovacic.”
“Waxaan ahaa mid kaftamayey markii aan weydiistay Luka inuu isiiyo lambarka 10-aad.”
Eden Hazard oo soo gudbinaya jawaabtii uu ka helay Luka Modric ayaa yiri: “Waxa uu isagu yiri maya, hadda waxaa waajib igu ah in aan raadsado lambar kale”.
Si kastaba ha haatee tani waxa ay ka dhigan tahay in Modric uu sii haysan doono lambarka 10-aad ee Real Madrid, Hazard ayaana heli doonin lambarkan oo uu aad u jeclaa, balse waxaa la warinayaa in loo gacan gelin doono lambarka 7-aad ee Los Blancos.
Xulka qaranka gabdhaha China oo guul ka gaaray dhiggooda South Africa kulan ka tirsanaa Koobka Adduunka ee Dumarka… + SAWIRRO